Xasan Sheekh’ Farmaajo laba arrinba waa lagu kari la’yahay | Marsa News
Xasan Sheekh’ Farmaajo laba arrinba waa lagu kari la’yahay
June 28, 2020 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku eedeeyey Farmaajo inuu diidan yahay oo lagu kari la’yahay laba qodob oo waa weyn muhiim-na u ah geedi socodka siyaasadeed ee dalka.
Xasan Sheekh oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa labadaas qodob kiyoo ka hadlaya yidhi:
Madaxweyne Farmaajo waxa uu si aan qarsoodi lahayn u diiddan yahay nidaamka federaalka ee ay Soomaalida cusub ku heshiisay iney dib ugu dhisato dowladnimadeedii.
Wuxuu sidoo kale diidan yahay qabashada doorasho heer qaran ah oo heshiis lagu wada yahay si loo helo kalsoonida heerka labaad ee federaalka oo kala ah dowlad-goboleedyada iyo ka saamileyda, sida xisbiyada siyaasada iyo guud ahaanba kalsoonida shacabka Soomaaliyeed.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in la joogo wakhtigii ay dhici lahayd doorashada qaran ee mudo-xileedka hay’adaha dastuuriga ah ee heer federal, hase yeeshee guddiga doorashada ay wadaan muddo kordhin.
Madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxay muddo dheer ku faanayeen iney wada joogeen muddo ku dhaw AFAR sano.
Hase yeeshee maalin ka mid ah muddadaas madaxweynuhu kama hadlin wax doorasho la yidhaa.
Haddaba ninkii doorasho laga sugayay ee aan ka hadlin muddadaas dheer sow shalay afkiisa af aan ahayn looguma hadlin?,” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Madaxweynaha JFS, waxaan ugu baaqayaa inuu dhago laab u daloola ku dhageysto baaqeyga: 1 – Waqti ayaa horay dalka iyo dadka uga soo lummay ee fadlan mid kale ha kasii luminin. 2 – Waqtiga yar ee ka haray xilli-xileedkaaga hal arrin ayuu ku filan yahay.
Kaas oo ah inaad u istaagto in doorashada loo helo heshiis siyaasadeed si awoodda xukunka si nabad ah loola kala wareego ama si sharci ah mar kale laguugu soo doorto.”